कुनै पनि सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकार मातहतका विभाग वा कार्यलयहरूमा कार्यलयलाई आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्दा वा विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य गर्दा सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट टेन्डर आह्वान गरिन्छ । टेन्डर आह्वान गर्दा सामानको गुणस्तर होइन सबैभन्दा कम मूल्यमा बिड गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई वा व्यक्तिलाई उक्त टेन्डर प्राप्त हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा जस्ले सबैभन्दा कम मूल्य राखेर बिड गर्छ उसले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने हुनाले त्यहाँ वस्तुको गुणस्तर हेरिन्न, न्यूनतम मूल्य मात्रै हेरिन्छ । समयानुकूल बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भैरहेको हुन्छ । बजारको वास्तविक मूल्यभन्दा पनि कम मूल्य निर्धारण गरेर ठेक्का प्राप्त गर्ने ठेकेदारले गुणस्तरहिन सामान उपलब्ध गराउँछ । वास्तवमा यो प्रक्रिया नै गलत छ । हिजोका दिनमा जे–जे भएका थिए आजका दिनमा पनि त्यही प्रक्रियाको हुबहु अनुसरण भैरहेको छ ।
भ्रष्टाचार मौलाउनुको पछाडि यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ । ठेक्का जित्नका लागि कुनै पनि सामानको परल मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सामान दिन्छु भनेर कबोल गर्ने ठेकेदारको उद्देश्य कालो छ भनेर भन्न सकिने अवस्था यसैबाट निर्धारण हुन्छ । त्यस्तै नेपालको विकास निर्माणका कामहरू बाटो, खानेपानी, सिंचाई, हाइड्रोपावर, सार्वजनिक भवन निर्माण, सडक कालोपत्रे आदिका कामहरू पनि सबैभन्दा कम मूल्य निर्धारण गरेर जुन ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का बिड गर्छ त्यो उसले नै प्राप्त गर्छ । सम्पूर्ण आयोजनाको लागतमूल्य एक करोडको छ उता ठेकेदार स्वयंले निर्माणको लागतमूल्य घटाएर ६० लाखमा गर्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा जान्छ र सबैभन्दा कम मूल्यमा बिड गर्ने ठेकेदारले नै ठेक्का प्राप्त गर्छ । आधा मूल्यमा काम गर्छु भन्ने ठेकेदार आफै घाटामा जान्छ र ऊ भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।
नेपालमा कुनै पनि विकास आयोजना निर्धारित समयमा नसकिनुको प्रमुख कारण यही हो । अहिले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर जसरी पनि ठेक्का आफ्नो हातमा पार्नुपर्छ भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ बजारमा र त्यसैको मारमा परेको छ नेपालको विकास निर्माण । सडकको काम आधामै छोडेर ठेकेदार भाग्नुको पछाडी अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा र ठेक्का प्रथा नै गलत छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माणमा गलत ठेक्का प्रणालीको आवश्यक सुधार गर्नु जरुरी भैसकेको छ । यही प्रक्रिया रहेका कारण ६ महिनामा निर्माण सप्पन्न भैसक्नु पर्ने विकास आयोजना ६ वर्षमा पनि नसकिने । हामी ठेकेदारको मात्रै दोष देख्छौँ । त्यस्का पछाडि लुकेको काला कर्तुतको बारेमा बोल्दैनौँ ।
प्रधानमन्त्री आफैं चिन्तित हुनुहुन्छ नेपालको ठेकेदार, उनीहरूको काम गर्ने शैली, ठेक्का प्रथा र विकास निर्माणको कछुवा गति देखेर । तर, यसपछाडिको कारण सबैलाई थाहा छ । यहाँ ठेकेदारलाई पाता कसेर बाध्नुपर्छ भनिन्छ तर ठेकेदारसँग प्रतिशत खाने र समयमा ठेक्का सप्पन्न गर्न नदिने भुरे टाकुरे राजाहरूको कर्तुतचैँ किन बाहिर आउँदैन र उनीहरूलाई किन कारबाही गर्न सक्तैन जुनसुकै सरकारले ? कतै न कतै घुमाउरो पाराले ठेकेदार राजनीतिक पार्टीकै सरक्षणमा हुन्छन् । सरकार र ठेकेदार बिच अन्तरङ सम्बन्ध रहन्छ। नेपालका अधिकाम्श पार्टी मन्त्री, कार्यकर्ताहरूलाई यिनै ठेकेदारले पालेका छन। अहिले सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि गाउँपालिका अध्यक्ष ठेक्का गर्छन् । प्रायः सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षको घरको आगनमा डोजर हुन्छ । डोजर छ, ठेक्का छ माथिसम्म पहुँच छ । काम विगारे पनि आफैँ काम सपारे पनि आफैँ । कारबाही कतैबाट पनि हुँदैन ।
हाम्रोमा विकास आयोजनाहरूको निर्माणकार्य गर्दा गुन्डाहरूको स्वीकृत लिनुपर्छ । ठेकेदारसँग प्रतिशत मन्त्रीले नै माग्छन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन नै गलत छ । नियती सबको सफा भएको खण्डमा यो परिवेश सिर्जना हुँदैन । जस्तो हिजोका दिनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा ठेक्का हाल्नेले ठेक्का पार्छ अनि त्यो काम कसरी सप्रिन्छ ? एक करोडको आयोजना छ बजेट विनियोजन पनि एक करोडकै छ तर, सभन्दा कम मूल्यमा काम गर्न सक्छु भन्ने ठेकेदारले त्यो आयोजनाको ठेक्का हासिल गर्छ भने के यो आयोजना सफल होला त ?
हाम्रो सरकारी नीति नै यस्तो छ । त्यसमा पनि भागशान्ति धुपधुहार नैवेदप्रसाद सबलाई दिनैप-यो अनि गुन्डा, राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताका धम्की खप्की र हप्की सहनै प-यो । पिच गरेको दुई दिनमा सडक किन भत्किन्छ भन्दा यिनै कारण हुन् । गिद्द, स्याल, मलसाप्रा मुसा छुचुन्द्रादेखि सिंहसम्मलाई चित्त नबुझाइ सुख छैन । रातो किताबमा बजेट पार्नदेखि भुइँमा साबेल हान्दासम्म धेरै रामकहानी छ ।